Aqalka Sare oo maanta aqrinta labaad mariyey Hindise Sharciyeedka Guddiga Musuq-maasuqa – Kalfadhi
Senatarada Aqalka Sare, oo manta isugu yimid kulankoodii 7-aad ee kalfadhiga 4-aad, ayaa waxay aqrinta 2-aad marsiiyeen Hindise Sharciyeedka Dhismaha Guddiga La -dagaalanka Musuqa ee Madaxa-banaan.
Ajandaha Kulanka Golaha, oo ay soo xaadireen 34 Senatar, ayuu Goluhu uga dooday Hidisaha Sharciga Dhismaha Guddiga La-dagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan, si ugu dambeyntii loo meel mariyo, marka uu ka gudbo aqrinta 3-aad oo wali u dhiman.
Hindisaha Sharcigan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu abuurayaa Guddi ka kooban 9 Xubnood, oo ay Golaha Wasiirradu soojeedinayaan, kaas oo markii uu Baarlamaanku ansixiyo Madaxweynuhu magacaabayo, iyada oo intaa kadib lagu baahinayaa Faafinta Rasmiga ah ee Dowladda, waxaana ay sidaas Soomaaliya ku yeelan doontaa Guddi Madax-banaan, markii ugu horreysay muddo 28 sano ah. Guddigaas waxa la filayaa inuu si xor ah ula dagaalamo musuq-maasuqa iyo wax is-dabamarinta.
Senatar Zamzam Ibraahim Cali, oo ah Gudoomiyaha Guddiga Cadaaladda iyo Xuquuqul Insaanka ee Aqalka Sare, ayaa sheegtay iney Sharcigan meelo badan ka fiiriyeen. “Sharcigu waxa uu dhisayaa Guddi 9 Xubnoo ka kooban, kuwaas oo ka imanaya qeybaha bulshada. Hal gabar ayaa ku cadeyd markii hore, annaguse waxaan ka dhignay in ay haweenku noqdaan labo. Sidoo kale, waxaa ku jiri doona Xubin ka socota Ururrada Naafada, taas oo ruuxeeda laga yaabo in ay haween noqoto” ayey tiri Senatar Zamzam.
Waxaa dhiman inuu Aqalku marsiiyo aqrinta 3-aad hindisahan, kadibna uu ansixiyo ama lagu celiyo Golaha Shacabka, sida ay Senatar Zamzam ka hor sheegtay maanta Kulanka Golaha Aqalka Sare. Hase ahaatee, waxa uu Goluhu ka hor intaas ku sameyn doonaa hindisaha wax-ka-bedel.